Thu, May 28, 2020 at 1:52am
शुक्रबार, १५ कार्तिक २०७६,	आहाखबर	2.92K
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल आएको भन्दै ग्रान्डी अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
ओली ग्राण्डी अस्पतालमा डायलासिस गरिरहँदा डा. चक्रराज पाण्डेले नेताहरुलाई ब्रिफ गरिरहेका थिए, ‘हि इज् पर्फेक्ट ।’ तर, विहीबारै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँको अवस्था अलि गम्भीर नै देखियो ।’
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतलाई डा. चक्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण स्वस्थ्य रहेको रिपोर्टिङ गरे । जब कि प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलामा समस्या आएपछि बुधबार नै डायलासिस गरिएको खबर सञ्चार माध्यममा आएको थियो । बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री डायलासिसका लागि गएका थिए । बुधबार दुई घन्टा र बिहीबार झण्डै चारघन्टा डायलासिस गरिएको थियो ।
अस्पताल प्रशासन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सूचना लुकाइरहेकै बेला बिहीबार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न ग्राण्डी पुगेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले औपचारिक रुपमा ओलीको डायलासिस गरिएको पुष्टि गरे ।
दोस्रो डायलासिस सकिनासाथ क्याबिनमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका प्रचण्डले चिकित्सकहरुसँग पनि केहीबेर कुराकानी गरे । भेटपछि उनले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘भर्खर एउटा डायलासिस भएर रेष्टमा हुनुहुन्छ । उहाँको स्थिति सामान्यतिर गइरहेको छ ।’
के भएको हो प्रधानमन्त्रीलाई ?
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय र अस्पताल प्रशासनले अहिलेसम्म उनको डायलासिस गरेको बताएको थिएन । उनीहरुको दाबी थियो, यो नियमित चेकजाँच मात्र हो ।
तर, उनीहरुले झुठो बोलिरहेको प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिदिएको छ ।
त्यसोभए प्रधानमन्त्री ओलीलाई भएको के हो त ? डायलासिस गरेको भनेपछि उनको मिर्गौलामा समस्या बढेको प्रष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार र विहीबार दुईपटक डायलासिस गरेर औषधि दिइएको छ, ताकि उनको मिर्गौलाले फेरि पहिले जस्तै काम गरोस् । चिकित्सकहरुले डिस्र्चाज गरेर घर पठाउनुको अर्थ पनि अबको केही दिन उनको अस्वथा हेर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ । तर, केही दिन पर्खेर हेर्ने निर्णय कत्तिको चुनौतीपूर्ण होला ? यो चिकित्सकहरुले नै जान्ने कुरा हो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री यसअघि सिंगापुर उपचार गर्न जाँदा नै यो विकल्पबारे छलफल भएको थियो । तर, यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार पुनः प्रत्यारोपण गर्दा मिर्गौला काम नगर्नेदेखि संक्रमण हुने लगायतका धेरै जोखिम हुन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर बालुवाटार आए पनि उनी पूर्णरुपमा स्वस्थ भइसकेका होइनन् ।
उनी चिकित्सकहरुको अब्जरभेसनमा नै हुनेछन् र थप परीक्षणहरुका आधारमा आगामी उपचार प्रक्रियाको निधो गर्ने चिकित्सकहरुको तयारी छ ।